Three zvikuru uye yakanaka nokuzvidzora BALANCInG Scooters aongorora - Jomo Technology Co., Ltd
The hoverboard vari nevanhu vakawanda muduku, nokuti vanogona yawana risingaperi kufara uye vakanakidzwa pamusoro akatasva hoverboard, asi sei kusarudza ngozi nokuzviremekedza vakadengezera sikuta? Zvino regai varumbidze zvitatu zvikuru uye yakanaka nokuzvidzora BALANCInG sikuta kwamuri. Wokutanga ndiye KOOWHEEL muchiso Self Balance Board K7 pamwe Ul 2272 advertising uye LG ngwara bhatiri. The 2 Wheel Self vakadengezera sikuta K7 Makaralı Two handicap 8.5inch Good Self vakadengezera sikuta HoverboardSolid Tires Hummer- anounza ruzivo nani kwauri! It ine siyanei michina kupfuura dzimwe hoverboards, kuubvumira kushandisa Motors zvikuru simba, kuti 8.5inch mavhiri ndedzokufungidzira ari tsvina uye uswa, kunyange zvazvo, kwete kuva Inflatable, iwe uchava achine zvakawanda vibration pamusoro gogonera terrains. Pashure zvakazara zuva kana tarira, takakwanisa kuwana 15-20km pamusoro hoverboard ichi. velocity Its vakawanda riri 12km paawa. Zvingatiita zvimwe rwendo chero nomumativi kumusoro inongoda nokuda Motors simba. Zviri mashiripiti zvinogona kuti miganhu kutora kubva panzvimbo imwe neimwe, dzisina kudzivirirwa nekugara zvakazara pasi pamusoro rwamakandida kufamba. The hoverboard anopindura mirayiro yenyu zvikuru kungoita uye hazvina kutora nguva kuti kunzwisisa izvozvo.
Mumwe raparurwa KOOWHEEL kuzvipira vakadengezera hoverboard K5 UL2272 uye ASTM zvitupa vane hunyambiri Makaralı uye akatungamirira mwenje. It anewo Bata pakati, nyore chaizvo kuti auye. On mabikirwo, Modular mamiriro, ndoda netambo, zvakawanda vakachengeteka, zvikuru nechepazasi chakaremara mwero (3 pa zviuru) uye yakatsiga zvikuru. Izvi kuzvipira vakadengezera hoverboard iri rakasiyana chimiro chokufambisa izvo ndipinde kwose muguta chero rako yemagetsi bhatiri anoramba kuenda. With maoko-isina bhasikoro kuenda pedyo nerimwe zuva mabasa akafanana basa, dhipatimendi kana anyplace zvimwe ungatsauka kurudyi kuva imhuka yakanyarara uye rinogutsa kubatanidzwa.
Koowheel manjemanje yakatanga kuti shangu yemagetsi sikuta pamwe bvumidzwa Innovative mufashoni inotonhorera design runovabvumira Developers kuti zvakanakisisa itsva. Its akatungamirira kuratidza chidzitiro zvachose anoratidza bhatiri uye nokukurumidza. Light asi akasimba.
Kazhinji, asi Segway hoverboard akaisa mbiri zvinodiwa mu kwesayenzi mberi yokufaranuka uye. Pakupedzisira mashoko akakurumbira kuti Segway anogona kusangana dzakawanda mufambo zvinodiwa kumusika paupamhi, aigona aivabatsira anotamisa kune zvakasiyana siyana pakufamba, uye mushumire somutsivi womutariri motokari.
Post nguva: Aug-23-2017